Dagomys - kuyinto esifundeni resort eningizimu Lazarev esifundeni Sochi resort. Eminyakeni engaphezu kwengu-130 edlule futhi insimu yalo ngemiyalo yezikhulu uNicholas II, ifa yasungulwa, okwakubekelwa kubhekwe impahla asebukhosini. Nokho, kuze kube 70s kwekhulu lama-20 kwaba isisebenzi ajwayelekile Dagomys zokuhlala. Isimo sashintsha ngemva ukwakhiwa kuyo izakhiwo ezimbili ehhotela, okuyizinto namanje ethandwa phakathi abathandi beach. Ngezinye isevisi yakho - athuthukile izivakashi nengqalasizinda ukuzijabulisa, kanye emabhishi Chic. Izivakashi bakhangwa kanye izinto ezithakazelisayo.
Labo abakhetha sihlanganise imisebenzi ebhishi nge hambo ezemfundo Lazarevski wesifunda nasezindaweni ezizungezile uzokwazi ukuvakashela izingosi eziningi ezithakazelisayo zemvelo, zomlando namasiko. Ngokwesibonelo, kuleli hlathi, esenyakatho yendawo Dagomys kukhona izindlu Ethno-isitayela, etholakala eduze olunothile itiye emasimini. Ziyakwazi zithandwa kakhulu yizivakashi ezibuka amazwe, njengoba izivakashi ziphathwa ukuba ehla esiphundu futhi ezihlukahlukene izinhlobonhlobo sezimoto. Basuke yanikezwa wendawo itiye elimnandi ovela samovar ngamalahle. Kukhona ungakwazi ukubuka embukisweni yezandla futhi ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo yasekuqaleni.
Bonke iholidi baye endaweni Sochi, shiya ukwazi ubuhle bakhe bemvelo. zokungcebeleka Dagomys ngokuyisimangaliso futhi endaweni ezungezile abasakwazi ezihlukahlukene. Phakathi kwabo endaweni ekhethekile kuhlala nezimpophoma. Nakuba akusiyo igama olusankondlo (Dagomys wokuxovela), lokhu lesikhumbuzo yemvelo abathandi uyakufanelekela nezindawo ezinhle. Itholakala 9 km kusuka resort ezindaweni ezikude lapho akwenzeki ukufinyelela ngemoto. Ngakho-ke, kusukela site, lapho pointer kuyinto Umfanekiso ngamapulangwe lamukeleni kahle uphawu 'wokuxovela ", izivakashi baye izimpophoma ngezinyawo. Esikhathini kushisa, kutuswa ukuba alethe ukugeza yakho isudi bakwazi ugxumela emanzini cool umfula entabeni Western Dagomys.
Umgede ezijulile Yar kanye eSiberia
Thanda lezimanga? Bese uya Dagomys. Izikhangibavakashi nokuzijabulisa the resort nasezindaweni ezizungezile ngeke akuvumele ubani ngizithola, ikakhulukazi uma uye ukugibela ukuqeqeshwa. Phela, kukhona ungathatha i uhambo ezithakazelisayo ku omunye emihumeni, ahlomele speleopohodov. The Deep Yar uzobona impophoma komhlaba kanye echibini, futhi eSiberia - umfula, bese anyukele esitebhisini esibekwe intambo.
Ingabe wena miss uma ukhetha indawo yabo Dagomys ukuphumula? Sochi ezikhangayo okuyinto ikakhulukazi kwezemidlalo, unikeza ezihlukahlukene ongakhetha hambo. Ngokwesibonelo, e-Dagomys has a yangasese vintage imoto Museum, sise ul. Semashko, 14. Bethula izimoto ezithwala namaloli ekhiqizwa ikakhulukazi engxenyeni yokuqala yekhulu lama-20.
Le sayithi yemvelo ekhona iningi izithombe, elibonisa ezikhangayo zendawo owaziwa.
Dagomys hhayi kanye wagcwala izibhelu abanolaka ne abaseTurkey. Okungenani, ngokusho legend, abake bakhonza khona onesibindi Cossack Georgy Uspensky, ngubani engawavumeli Uzalo Basurmanov. Ngolunye usuku yena nozakwabo baphoqeleka ukuba wenze stop at umlomo River Dagomys futhi zihlanganyele empini emelene abaseTurkey. Izitha baphoqeleka ukuba ashona, kodwa Kwavela ukuthi le Cossacks ukulahlekelwa esindayo futhi abaningi balimala. Phakathi kwazo kwakukhona ubaba ka kweNyuka. Ngaphambi kokufa kwakhe, wabuza ozakwabo ukuhlanganisa lomngcwabo nge "ifasitela", futhi ngemva kokufa njengomhlatshelo ukubeka umzimba zakhe eziqondile futhi agqoke esiqongweni sentaba. I Cossacks wenza konke abebefuna ukukwenza, futhi ezinsukwini ezintathu comrades efile waxwayisa mayelana nokuhlasela Turkish. Kuphela emva ekunqobeni kokugcina Batko sidumbu interred. Ngokwabo Cossacks inflicted e ofeleba ku ithuna umhlaba kangaka elaligcwele yonke intaba, ogama lakhe behlonipha iqhawe abanesibindi George.
Khuphukela esiqongweni sale mbhoshongo ngokuyisimangaliso abantu ukuqeqeshwa umzimba ngendlela efanele akunzima, kodwa ekugcineni baba bayovuzwa ithuba zibabaza ukubukwa omangalisayo kolwandle, yokungcebeleka nezindawo ezizungezile.
Okukhulu kakhulu Cross izingwadule
Eholidini uzokwazi ukubona futhi ezindaweni ezithile zenkolo. Dagomys kuyinto elula yekucala uhambo esigodlweni sezindela Cross Hermitage. Lokhu sezindela lakhiwa ngo-1990 ngasekupheleni, eduze resort, edolobhaneni Solokh-Aul, e sifinyelela engenhla entabeni Shahe River. Ngaphambi Okthoba Revolution endaweni yayo ixazululwe izindela Hermits. Bathi futhi ukuthi ngisho nangaphambi lezi izingxenye bazokwakha edumile okusha Athos sezindela.
"I ezingwadule Cross" njengesipho Sochi lakhiwa abasebenzi sasizithola eBelgrade. Esikhathini sezindela ungakwazi ukukhuleka isithonjana ezintathu Hands, okuyinto Serbia main shrine edume ohlonishwayo.
Tour of the Valley Ashe
Ngesikhathi resort uzokwazi ukuhlola kanye Circassian ezikhangayo kazwelonke. Dagomys itholakala eduze nedolobhana Kalesh, Uzenza kanjani uhambo izimpophoma amabili amahle izimoto wonke amasondo. Ekubuyeleni kwakho uzonikezwa izitsha adygskoj cuisine, futhi ngeke zibone umbukiso somlilo ngomculo wendabuko nokudansa.
Manje uyazi lapho edolobhaneni Dagomys. Sochi ezikhangayo lokhu endaweni zahlukahlukene kakhulu, futhi ukuhlolwa kwabo kuzokuvumela wenze ukuhlala kwakho ihlukahluke futhi ezithakazelisayo.
Zokungcebeleka yomlando ka Marrakech, okubangela injabulo phakathi izivakashi
Idolobha wesifundazwe Vereya. Izikhangibavakashi ukuthi bayakufanelekela ngokuvakashela
Uyini X-reyi yesifuba
Ubani ofuna ukuzama amazing apula "pie" pie? Indlela ngawe
Isikebhe sePlastiki sokudoba. Ngingenza isikebhe seplastiki ngezandla zami?